Maxaad ka ogtahay halista cudurka Ebola? (Daawo) – Radio Daljir
Juunyo 21, 2019 6:23 b 0
Maxaad ka ogtahay halista cudurka Ebola? Soomaaliya khatar ma ku yahay cudurka oo hadda xaalado lagu arkay UGANDA iyo dad looga shakiyey oo Kenya lagu arkay? sidee looga hortegi karaa halista cudurkan?
waxbadan ku ogoow warbixintan.